Posted by ko no on Jul 10, 2011 in Copy/Paste, Health & Fitness |0comments
ပခုက္ကူမြို.က အဖြစ်အပျက်လေးတွေပါ။ တီဘီရောဂါဆေးဟာ ပုံမှန်ခြောက်လလောက်သောက်၇တယ်လို.နားလည်ပါတယ်။အဲဒီဆေးတွေဟာ တကယ်ကို ကမ္ဘာ.ကျန်းမာရေးအဖွဲ.နဲ.ပူးပေါင်းပြီး အလှူရှင်တွေကလှူတန်းထားတာတွေပါ။ဒါတွေဟာ သက်တန်းကုန်နေတယ် ဒိတ်လွန်နေတဲ.ဆေးတွေဖြစ်သင်.ပါသလား။ကျွန်တော်တို.နားက ဦးလေးတစ်ယောက်က တီဘီရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ဆေးခန်းကို သွားပြတော. အခမဲ.ဆေးလည်း၇ခဲ.ပါတယ်။ ဒါပေမဲ. ပထမတော. ဆေးကဒ်ပေးပါတယ် ။ဆေးကလည်း ကိုးလပိုင်းဒိတ်ကုန်တာဆိုတော.အဆင်ပြေတာပေါ့။နောက်တစ်ခါထုတ်တော. ခြောက်လပိုင်းကုန်ဖြစ်နေတယ်။အဒြိဦးလေးကလည်း ဒိတ်ကုန်တဲ.အထိသောက်တယ်။ဒါပေမဲ.ဆေးက ခုနစ်လပိုင်းလဆန်းအတွက်သောက်စ၇ာကလေးရက်လောက်ကျန်နေသေးတယ်။သူကလည်းမသောက်ရဲတော. လဲပေးဖို.တောင်းဆိုပါတယ်။
ဆေးပေးတဲ.သူကနားမလည်တာလား မသိတာလားတော.မသိဘူး။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ဆေးရုံမှာဒီထက်တောင်ဆိုးသေးတယ်။ခင်ဗျားကတစ်၇က်နှစ်ရက်လါန်တာလို.တောင်ပြန်ပြောသတဲ.။ကျွန်တော်လည်းလန်.သွားတယ်။အော်သူသာဖြစ်ရင် ဒါမျမဟုတ်သူ.အမျိုးဆိုရင်ဘယ်နဲ.လုပ်မလဲဆိုတာသိချင်လာမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို.ဆိမျာအနည်းငယ်စုံစမ်းကြည်.တော. ဆေးကဒ်တွေကိုဆေးဆိုင်တွေမှာ ဒိတ်ကုန်ခါနီးတွေနဲ. ငွေအလိုက်ယူပြီးစီးပွားရှာနေတယ်လို.သိရပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ပျောက်တော.မလဲ။
second round TBဖြစ်နေတာမဆနးပါဘူးပေါ့လေ။အော်သူတို.ကတော. ကိုယ်ကျိုးကြည်.နေတာပေါ့လေ။နိုင်ငံတော်အစိုးရသစ်က ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ်တည်ဆောက်နေစဉ်မျာဒါတွေကမရှိသင်.တာပါ လူတိုင်းသတိထား စည်းကမ်းရှိသင်.တာပေါ့။ငါတကောမကောသင်.ပါဘူး။ ကျန်းမာရေးစောင်.ရှောက်မျုအထိစိးပွားမရှာသင့်ပါဘူး။ ကျွန်တော် နောက်ထပ်တင်ပြစရာရှိပါသေးတယ်အခုတော.ဒီလောက်ပါပဲ။ ကိုယ်ကျိုးရှာသူများ သတိနဲ.ယှဉ်နိုင်ပါစေ။